Melatonin (မယ်လတိုနင်) : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Dr. Thiha Phyo Myint မှ ရေးသားသည်။ 12/05/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Melatonin (မယ်လတိုနင်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Melatonin ၏ အဓိကတာဝန်မှာ အိပ်စက်ခြင်း အလေ့အထ သံသရာကို ထိန်းသိမ်းပေးရန်ဖြစ်သည်။ အမှောင်သည် ခန္တာကိုယ်မှ melatonin ပိုထွက်စေပြီး အိပ်စက်သင့်ပြီဖြစ်ကြောင်း အချက်ပြသည်(အိပ်ချင်လာစေသည်)။ အလင်းရောင်သည် ခန္ဓါကိုယ်မှ melatonin ထွက်ရှိမှုကို လျှော့ချပေးပြီး သင့်ကို အိပ်ယာမှ နိုးလာစေသည်။ အိပ်မပျော်သည့်ဝေဒနာကို ခံစားနေရသည့် အချို့လူနာများတွင် ခန္တာကိုယ်တွင်း melatonin ဓါတ် နည်းပါးနေလေ့ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် melatonin ကို ဖြည့်စွက်သောက်သုံးပေးပါက အိပ်မပျော်သည့် ဝေဒနာကို သက်သာစေမည်ဟု ယူဆရသည်။
Melatonin (မယ်လတိုနင်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
melatonin ကို အသုံးပြုမည်ဆိုလျှင် ဆေးညွှန်းတွင်ပါသည့် အတိုင်း သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း တိကျစွာ အသုံးပြုရပါမည်။ လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ သုံးစွဲခြင်း မပြုရပါ။
သဘာဝဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုတော့မည်ဆိုလျှင် ဆရာဝန်နှင့် ဦးစွာတိုင်ပင်ပါ။၎င်း ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ၊ဆေးများ နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်သည့် ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးရန်လည်း လိုပါလိမ့်မည်။
ပထမဆုံးအကြိမ် အသုံးပြုသော အခါ ပမာဏ အနည်းဆုံးမှ စတင် အသုံးပြုပါ။melatonin ကို ညအိပ်ယာဝင်ခါနီးအချိန် သို့မဟုတ် သင်အိပ်စက်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ချိန်တွင် သောက်ပါ။ အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် melatonin ကို (လေယာဉ်ကြာမြင့်စွာ စီးရသဖြင့် နေ့ညကမောက်ကမဖြစ်ခြင်း) jet lag အတွက် အသုံးပြုပါက သင်ခရီးဆုံးရောက်ပြီး စအိပ်သည့်ညတွင် စတင်သောက်ရမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် နှစ်ရက်မှ ငါးရက်အထိ ဆက်သောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် အိပ်စက်ခြင်းနှင့်မဆိုင်သည့် ပြဿနာများအတွက် melatonin ကို သုံးစွဲပါက မည်သို့သောက်ရမည်၊မည်သည့် အချိန်တွင်သောက်ရမည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ သင့်ဆရာဝန်ကို အသေးစိတ်မေးမြန်းပါ။
ဆေးပြားတပြားလုံးကို မြိုမချပါနှင့်။ မြိုချခြင်း၊ဝါးစားခြင်းမပြုဘဲ ပါးစပ်ထဲတွင် ပျော်ဝင်သွားပါစေ။ ဆေးပြားပျော်ဝင်ပြီး မြိုချသည့်အခါ ဆန္ဒရှိပါက ရေသောက်နိုင်သည်။
သင့်ရောဂါ အခြေအနေ မသက်သာလျှင်ဖြစ်စေ၊ ပိုဆိုးလာလျှင်ဖြစ်စေ ဆရာဝန်ကို အသိပေးရမည်ဖြစ်သည်။
Melatonin (မယ်လတိုနင်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
[ယေဘူယျ အသိပေးချက် – ဆေးအများစုမှာ အခန်းအပူချိန်တွင် သိုလှောင်ထားနိုင်ပါတယ်)
Melatonin ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Melatonin ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Melatonin ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Melatonin ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Melatonin ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Melatonin (မယ်လတိုနင်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
melatonin ကို မသောက်သုံးမီ
-melatonin နှင့် ဓါတ်မတည့်လျှင်။
-သွေးရောဂါများရှိလျှင် (ဥပမာ။ ။ သွေးမတိတ်ရောဂါ)
-သွေးပေါင်ကျခြင်း သို့မဟုတ် တက်ခြင်း။
-ကိုယ်အဂါၤအစိတ်အပိုင်းများ အစားထိုးထားသောအခါ အစားထိုးလိုက်သည့် အစိတ်အပိုင်းကို ခန္ဓါကိုယ်မှ တိုက်ထုတ်ငြင်းဆန်ခြင်း မပြုစေရန်အတွက် ပေးသည့်ဆေးများကို သုံးစွဲနေလျှင်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Melatonin (မယ်လတိုနင်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် ××× ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။
Melatonin (မယ်လတိုနင်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အင်ပြင်များထွက်ခြင်း၊အသက်ရှုရ ခက်ခဲလာခြင်း၊မျက်နှာ၊နှုတ်ခမ်း၊လျှာ သို့မဟုတ် လည်ချောင်းတို့ ရောင်ရမ်းခြင်း အစရှိသော ဓါတ်မတည့်သည့် လက္ခဏာများ ခံစားလာရပါက အရေးပေါ်ကုသမှုကို ခံယူရပါမည်။
Melatonin ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို အကုန်မသိရှိရသေးသော်လည်း ကာလတို သုံးစွဲပါက Melatonin သည် ယေဘုယျအားဖြင့် စိတ်ချရမှုရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။(အချို့လူနာများတွင် ၂နှစ် ခန့်အထိ သုံးစွဲကြသည်)။
Melatonin ၏ အတွေ့ရများသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ
ဘယ်ဆေးတွေက Melatonin (မယ်လတိုနင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Melatonin ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Melatonin (မယ်လတိုနင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Melatonin က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတို
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Melatonin (မယ်လတိုနင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Melatonin ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Melatonin (မယ်လတိုနင်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ Melatonin ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
အိပ်စက်မှု အလေ့အထ မမှန်ခြင်းအတွက်
-ညအိပ်ယာဝင်ချိန်တွင် ၃ – ၆ မီလီဂရမ် သောက်ရပါမည်။
ကလေးတွေအတွက် Melatonin (မယ်လတိုနင်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အိပ်စက်မှု အလေ့အထ မမှန်ခြင်း(နေ့ညမှားခြင်း)အတွက်
-ညအိပ်ယာဝင်ချိန်တွင် ၂ – ၃ မီလီဂရမ် သောက်ရပါမည်။ ထို့နောက် ၁ပတ်၂ပတ် ခန့်ကြာပြီးလျှင် လိုအပ်ပါက ၄ – ၆ မီလီဂရမ်သို့ တိုးမြှင့်နိုင်သည်။
အများဆုံးပေးနိုင်သော ပမာဏမှာ ၁၀မီလီဂရမ် ဖြစ်ပါသည်။
(ယေဘူယျအသိပေးချက် – ကလေးလူနာများမှာ ဘယ်လောက်အချိုးအစားပေးရမလဲဆိုတာ အတည်မပြုရသေးပါ။ သင့်ကလေးငယ်အတွက် သောက်သုံးရန် စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဆေးဝါးမဆို အသုံးမပြုရသေးခင်မှာ စိတ်ချရမှုအနေအထားကို အပြည့်အဝနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အချက်အလက်များ ထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ)
Melatonin (မယ်လတိုနင်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Melatonin ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
သောက်ဆေးတောင့် : ၃၊၅၊၁၀ မီလီဂရမ်။
အရေးပေါ်အခြေအနေသို့မဟုတ် ဆေးပမာဏလွန်သွားတဲ့အခြေအနေတွေမှာ အရေးပေါ်ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသမှုခံယူပါ)
Melatonin ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Melatonin. https://www.drugs.com/melatonin.html. Accessed June, 30, 2016.
Melatonin. http://www.everydayhealth.com/drugs/melatonin. Accessed June, 30, 2016.
Melatonin. http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/melatonin/background/hrb-20059770. Accessed June, 30, 2016.